Ukudibana kwendalo yonke-umatshini wokuhambisa umbane waseSingapore pte ltd
Umenzi waseSingapore wamalungu onke, Ingcali kwi: Iindibano zamanye amazwe, Amalungu eSingapore eUniversal, ngokudibanisa amalungu e-Universal, amalungu elinye le-Universal, amalungu aphindwe kabini e-Universal.
Udidi: Amalungu onke
Amalungu e-Precision Universal
iakhawunti. ukuya kwi-DIN 808
Ukusetyenziswa kwazo zonke iidrayivu kubunjineli boomatshini
Amalungu achanekileyo angatshatanga
Amalungu ngokuchanekileyo kabini
Uyilo olunokuthwala okucacileyo okanye ukuthwala inaliti
Amalungu e-Precision Universal G
Uhlobo lwe-G: Ukudityaniswa kokudibana okukodwa
Iibheringi eyilelwe njengokuzala ecacileyo
Ubukhulu. isantya 1000 [1 / min]
Ubukhulu. umahluko we-angle 45 °> Iyafumaneka nge
-Ukugqitywa kokuzalela i-H7, xa uceliwe ngeqhosha leentsiba
- ezinamacala wazala
- Isikwere Amalungu e-Precision Universal GD
Chwetheza i-GD: Ukuchaneka ngokudibeneyo ngokudibeneyo
Ubukhulu. umahluko we-angle engama-45 ° ngokudibeneyo
Amalungu e-Precision Universal H
Chwetheza H: Ukuchaneka ngokudibeneyo
Akukho sondlo ngenxa yenaliti
Ubukhulu. isantya 4000 [1 / min]
Ukugqiba ukuzala i-H7, ngesicelo sendlela yeentsiba
Isikwere Amalungu e-Precision Universal HD
Uhlobo lwe-HD: Ukuchaneka ngokudibeneyo ngokudibeneyo
hle Amalungu onke
I-DIN 808 iyandiswa
Ukudityaniswa kwemigama emikhulu phakathi kokuphela kweshafti
Ikwafumaneka ngokutshixa ngokukhawuleza kwe-GR; HR
hle Amalungu onke Ukongezwa kweGA
Uhlobo lweGA: Ukuchaneka ngokudibeneyo ngokudibeneyo
- Isikwere hle Amalungu onke HA iyandiswa
Uhlobo lwe-HA: Ukudibanisa kabini ngokudibeneyo
Amalungu e-Precision Universal GR
Chwetheza GR ngokukhiya ngokukhawuleza
Ubukhulu. I-angle yokwahlulahlula engama-45 °> Ukutshixwa ngokukhawuleza okufumanekayo nge:
-Kugqitywe ukuzala i-H7 kunye neendlela eziphambili zeentsiba ngokwe-DIN 6885 iphepha 1
Amalungu e-Precision Universal HR
Chwetheza i-HR ngokutshixa ngokukhawuleza
Ubukhulu. umahluko we-angle 45 °> Ukutshixwa ngokukhawuleza okufumanekayo nge